May Nyane: ကျမနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်
ရက်စက်ဆိုးယုတ်မှုတွေ.. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတွေထဲ အချစ်တခုကို သွပ်ထားတာ မလိုချင်ပါဘူး။
ဟုတ်တယ် ..အမ..တခုခု ပိုပြီး တခုခု လိုနေတယ်။
ဒီပိုစ့်လေးကို အရမ်းကြိုက်တယ် အမ... အမ ပြောသလို မပြောတတ်လို့... စိတ်ထဲမှာ တွေးနေမိတာတွေကလဲ အဲဒါမျိုးတွေပဲ...။
ပြီးတော့ ဆရာမ ဂျူးရဲ့ ဝတ္ထုကို ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး အများကြီး မျှော်လင့် ထားခဲ့တာ... ... ...
အမ ရေးမယ့် အချစ်ဝတ္တုကို မျှော်နေမယ်နော်...
ဆရာမရေ ပို့စ်အသစ်တင်ထားတာ တွေ့လို့လာဖတ်သွားပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်တာ ပိုက်ဆံ (သို့) အရင်းအနှီးဘာမှ မစိုက်ရပါဘူး။ လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောက်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုမျိုး မဟုတ်ရင် စိတ်ကူးတွေက လက်တွေ့ အကောင်အထည် ပေါ်လာရတာတွေချည်းပါ။ ဆရာမရဲ့ စိတ်ကူးတွေ လက်တွေ့အကောင်အထည် ပေါ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်။
I just finished reading that book. It was nice and interesting but not much of love.
သွားသုတ်သုတ်၊ စားသုတ်သုတ် ခေတ်ကြီးထဲမှာ နူးညံ့အေးဆေးတဲ့ အချစ်က အနည်းနဲ့အများတော့ တိုးဝှေ့တွန်းတိုက် ခံရတယ် ထင်တာပဲ အမရေ..၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ တကယ့် မေတ္တာစစ်ကနေ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဆီ သွားချင်တဲ့ စိတ်ကူး(ယဉ်)မှုကို ကျနော် လည်း ကြိုက်တယ်ဗျ၊ ဒီလိုအခါ ကျနော်က imagination ဆိုတာထက် vision လို့တောင် ပိုပြီး သုံးချင်မိပါတယ်...။
ဆရာမချရေးမှ အချစ်ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်.. မသ်ိတော့တာ ကြာလှပြီပေါ့။ ၀မ်းစာအတွက် ရုန်းကန်ရခြင်း၊ ၀တ်ဆင်ဖို့ အတွက် ရုန်းကန်ရခြင်း၊ ဘ၀ မြင့်မားဖို့ အတွက် ရုန်းကန်ရခြင်းတွေမှာ အချစ်မေတ္တာဆိုတာ အတော်လေး ဖုံးကွယ် (ပုံးကွယ်) နေတော့တာပါပဲ။
ဆရာမစိတ်ကူးယဉ်နဲ့ ရေးနေပြီဆိုတော့ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ဖတ်ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
(ကျနော်ငယ်ငယ်က ပီတာပန်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ကူးသိပ်ယဉ်တယ်.. :)))))) )
တခါတခါကျတော့လဲ ခေတ်ကြီးရဲ့ မွန်းကြပ် လိုအပ်မှုတွေ ဖုံးအုပ်သွားလို့ မေတ္တာတရားတွေ ပါးလျသွားတတ်တာမျိုး ထင်ပါရဲ့ ဆရာမရယ်..
အချစ်ရှိမှ မေတ္တာတရားရှိမှ ကမ္ဘာကြီးလှမှာ ငြိမ်းချမ်းမှာကို ချွင်းချက်မရှိ ယုံကြည်လက်ခံသူတွေ ပေါများလာဖို့ ကိုယ့် အကြည်ဓာတ်လေး မခမ်းခြောက်သွားအောင် တဦးချင်းစီက ကာကွယ်သွားရမှာ လို့ ထင်မိတာ..။ ခမ်းသွားရင် ပြန်ဖြည့်၊ နည်းလာရင် ပြန်ပျိုး အဲဒီလိုပဲ ဘ၀ကို ဆက်ရမယ် ထင်ပါရဲ့..
မ ရေ... စိတ်ကူးယဉ်တတ်လွန်းလို့တခါတလေ ကိုယ့်စိတ်ကူးကိုယ့်ကမ္ဘာနဲ့ လက်တွေ့ ဘ၀ရန်တွေဖြစ်ရတဲ့အထိပဲ... မ တွေးသလို ပြန်တွေးတော့ တချို့ စိတ်ကူးတွေပိုင်ခွင့်ရလို့ ကျေနပ်မိတယ်... ကျွန်မလဲ အလုပ်ဝင်ကာစက ကလေးလို မနူးမနပ်ပုံမို့အဆူခံရသေးတယ်... ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကြိုက်တာကိုယ်ဆက်လုပ်တာပဲ...8-)...
နောက်ပိုင်း ဆရာမဂျူးလက်ရာတွေမှာ အချစ်က အငွေ့ အသက်လေးလောက်ပဲ ပါတော့တာမို့ပိုချစ်ရတဲ့သူကိုယ်မှာလဲ အချစ်ကိုတော့ သိပ်မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး မ ရေ... ဒါပေမယ့် ပေးတဲ့messageလေးကိုတော့ ဝေေ၀၀ါးဝါးနဲ့လူငယ်တွေအမြင်မှားသွားမှာ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်မိတယ်...
ရက်စက်ဆိုးယုတ်မှုတွေဟာ ဒီခေတ်ကြီးမှာမှရှိတာမဟုတ်ဘူး ဟိုးကတည်းကရှိနေခဲ့တာဆိုတဲ့ ရက်စက်ဆိုးယုတ်မှုကို သာမာန်လိုယဉ်ပါးသွားနိုင်တဲ့ messageမျိုးကြီးတွေ့ လိုက်ရတော့ ရင်ထဲမှာ တမျိုးပဲ... ပြီးတော့မှ... ကိုယ်နားလည်တာလွဲလို့ နေမှာပါလေလို့တယောက်ထဲဖြေသိမ့်လိုက်ရတယ်...
မ ပြောသလို... အမှတ်တရတုန်းကလို အချစ်ချည်းသက်သက် ၀တ္ထုမျိုးတွေ ငတ်မွတ်တယ်...
တကယ်ဆို အချစ်လဲလိုတယ်...ဟုတ်တယ်နော် မ
ဆရာမ ( မေငြိမ်း ) ပြောတာနဲ့ တသဘော တည်း ရှိပါတယ်။ ကျနော် လည်း လူတွေရဲ့ “အချစ်စိတ်” ကို အင်မတန်လှတဲ့၊ အထက်တန်းကျ တဲ့ စိတ်လို့ ထင်လို့မို့ ၂၀၀၄ လောက်တုန်းက “အချစ် သည် ပဉ္စမမြောက် ဗြဟ္မာစိုရ်တရား” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတပိုင်း တစတောင် စမ်းရေးကြည့်ဖူး ပါတယ်။ ဘုန်းကြီး တွေနဲ့ ပြသနာတက်နိုင်တယ် ဆိုတာသိသိကြီးနဲ့ပါး)။ နောက် အဲဒီ အချစ်ကို ဦးညွတ် ဂုဏ်ပြုလိုတဲ့ အာသီသကို မဖျောက်နိုင်သေးတာနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ကျနော့်ရဲ့ ( လူလာမဖတ်တဲ့၊ ကျနော့်ရင်ထဲရှိတာ ကို အာသာပြေ ချရေးလို့ရရုံသာ ရည်ရွယ်တဲ့ )ဘလော့ဂ်မှာ အဲဒါကို ချရေးထားမိပါသေးတယ်။ ဒီမှာပါ။
ကျနော်တို့က ရင်ထဲမှာရှိပေမဲ့ အဖြစ်ရှိအောင် မရေးတတ်လို့ ဆရာမ ရေးဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့စာအုပ် ရေးဖြစ်အောင် ရေးပါလို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တဦး အနေနဲ့ တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ ဆရာမ ကိုယ်စိတ် ချမ်းသာပါစေ။
ကျွန်မလည်း အချစ်ဝတ္ထုကောင်းကောင်းဖတ်ချင်တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း အများကြီးသိချင်တယ်။
ညီမလည်းအဲလိုခံစားနေတာ......ဆရာမဂျူးရဲ့ စာအုပ်ရတော့အရင်လိုပဲတငြိမ့်ငြိမ့်ဖြစ်စေမယ့် အချစ်တွေ့ရမယ်ထင်ပြီး အငမ်းမရဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာ....ဒါပေမယ့်အငတ်မပြေခဲ့ပါဘူး.......တကယ်လွမ်းပါတယ်.....အချစ်စစ်စစ်ကို.....ခက်တာကကိုယ်တိုင်းလည်းမရေးတတ်ဘူးကွယ်......ဆိုးပါ့......ဘာပဲပြောပြောအများရဲ့ရင်တွင်းဆန္ဒတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မကိုကျေးဇူး......မစိတ်ကူးလေးတွေအမြန်